Ninka Aduunka Ugu Qurxoon - Raga Stylish Talooyin | Ragga Stylish
Ninka ugu quruxda badan aduunka
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, fashion
Sideen ku ogaan karnaa waa kuma ninka adduunka ugu qurxoon? Jawaabtu waa mid shakhsiyadeed oo had iyo jeer waxaa go'aamin doona isha daawadayaasha. Sida iska cad qof walba wuxuu ku celceliyaa shaqsiyad iyo dhadhan ka duwanHaa, laakiin saynisku wuxuu horey u sameeyay qaacido u gaar ah oo lagu xaliyo qaabkan.
Sidaa darteed, ma dhihi doonno ama iyaga, saynisku wuxuu oran doonaa. Waa halkaan oo lagu sameeyay xisaab xisaabeed adoo adeegsanaya lambarka dahabiga ah iyo dabcan xisaabintaadu ma dhicin. Si loo xisaabiyo ninka adduunka ugu qurxoon, wajiyadii ay dad badani hore u yiqiin ayaa la isticmaalay, iyadoo la galay adduunka dad caan ah.
1 Sidee u xisaabisaa ninka adduunka ugu qurxoon?
2 Waa maxay wajiyada ugu caansan
3 Sideen u xisaabino quruxdeena?
Sidee u xisaabisaa ninka adduunka ugu qurxoon?
Daraasad ayaa laga sameeyay saamiga sanka, afka, garka iyo indhaha. Qiyaasta wejiga sidoo kale waa la tirinayaa maadaama balaca iyo dhererka wejiga la cabirayo natiijooyinna laga helayo waa inay ahaadaan u dhigma tirada tirada dahabka. Lambarkan waa midka la isticmaalo waxaana lagu go'aamiyaa sida loo xisaabiyo dhammaan saamiga saxda ah ee ka jira qaybaha dabiiciga.
Sanad walba darajo ayaa laga dhex sameeyey wejiyada caanka ah ee ragga oo had iyo jeer isku dad baa soo baxa. Ka mid ah wejiyada qumman ayaa badanaa u muuqda Robert Pattinson iyo George Clooney, kuwaas oo ah kuwa ugu sarreeya jaantusyada.
Maanta waxaan haynaa codsiyo iyo boggag internet ah taasi waxay noo sheegaysaa cabirka ay tahay inaan galno si loo xisaabiyo weji kasta. Xaqiiqdii uma baahnid inaad ahaato xiddig sare u qaadida hankaaga oo aad u tixgeliso inaad tahay mid ka mid ah ragga ugu qurxoon adduunka.
Oo ka waran quruxda tartanka? Sida iska cad halkan astaamo taxane ah ayaa ka diiwaangashan oo aan u ekaanin xisaab xisaabeed. Qummanaanta bilicsanaanta waxay ku dhacdaa shuruudaha kala duwan, iyaga ka mid ah waxay leeyihiin jidh wanaagsan, nimco, xarrago, dabaqad, hammi nololeed iyo wixii ka sarreeya oo dhan waji qurxoon oo soo jiidasho leh, in kasta oo muuqaalku aanu ahayn wax walba, caqliga waa in lagu daro inta badan.
Waa maxay wajiyada ugu caansan
Waxaa jira sannado badan oo Robert Pattinson wejiga kabtanku waa ninka dunida ugu quruxda badan. Astaamahan waxaa ka mid ah cunsurro ay soo ururiyeen xarumaha qalliinka hormarinta caaga iyo bilicsanaanta. Astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah a qaabka caadiga ah ee garka si fiican loo jarjaray iyo saamiga wejigiisa ee qaatay dhammaan astaamaha sumcadiisa. Calaamado aad u yar ayaa la siiyay bushimaheeda inay khafiif tahay oo aan mug lahayn.
Halkan waxaan ku faahfaahineynaa liistada boqolleyda lagu soo gabagabeeyay xisaabinta xisaabta:
Noocyada Harry 89,63%
Idiris Elba 87,93%
Marka laga reebo Robert Pattinson waxaa jira xog ay khibrad u leeyihiin aragtiyadan cilmiyaysan ee ah in George Clooney uu ku guuleystey liisaskaas isla sannado badan. Wuxuu qaataa dhibco aad u fiican, laakiin wax badan kama badna Bradley Cooper ama Brad Pitt. Ragga kale ee liiska ku jira sida Ryan Gosling waxay matalaan quruxdooda inay yeeshaan san wanaagsan, sida Harry Styles oo leh indhaha ugu quruxda badan iyo garka saxda ah.
Sideen u xisaabino quruxdeena?
Waxaan u nimid inaan helno qiimeyn shaqsiyeed oo ku saabsan quruxda in la jiido kalkuleytar si loo helo natiijada tirooyinka. Xaqiiqooyin xisaabeed iyo cilmiyaysan waxaa lagu adkeeyay xeerka saxda ah ee wajiga kaamil ah marka masaafada toosan ee udhaxeysa indhaha iyo afku ay lamid tahay 36% dhererka wajiga. Xog kale oo macluumaad ah waxay noqonaysaa in masaafada siman ee u dhexeysa indhaha ay ku habboonaan laheyd 46% wadarta guud ee wajiga.
Si loo xisaabiyo wejigaaga waa inaad sawir ka qaaddaa wejigaaga, doorbidayaa xagga hore iyo adigoon dhoola caddayn. Waa inaad ku daabacdaa sawirkan xaashi A4 ah oo aad bilowdo sameynta xisaabinta cabirka marka loo eego Saamiga tirada dahabka (1,618).
Sanka: Waa inaad cabirto dhererka sankaaga, laga bilaabo qaybta dhexe ee sunnayaasha ilaa qaybta ugu ballaaran ee sankaaga oo u kala qaybiso qaybta ballaaran ee sanka. Haddii natiijadu ku dhowdahay nambarka 1,618 markaa waxaad leedahay sanka oo qumman.
Dibnaha Waa inaad cabirtaa dhererka bushimahaaga oo aad u kala qaybisaa ballaca sankaaga. Haddii natiijadu ku dhowdahay lambarka 1,618 markaa waxaad leedahay dibno dhammaystiran.
Qaabka wajigaaga: Waa inaad sameysaa seddex cabir: mid wuxuu ka qaadayaa cabirka min koritaanka timaha ilaa xariiqda suniyaha, midna wuxuu ka imaanayaa xariiqa suunka ilaa salka salka iyo kan kale ilaa salka sanka ilaa garka. Dhammaan qaybaha aan cabirnay waa inay ku bixiyaan isla natiijada masaafada, si loo go'aamiyo weji kaamil ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Ninka ugu quruxda badan aduunka
Sida looga baxo murugada